Miolakolaka lohataona-fihoaram- lohataona-cylindrical loharano lehibe - China Shandong Qingyun Machine
Famatrarana Springs - Cylindrical Hot Springs Large Roll famatrarana
Engineering milina lohataona
Large lohataona - coil lohataona mafana mavesatra lohataona
Miolakolaka lohataona-fitaomana lehibe lohataona-cylindrical lohataona
Tower lohataona bongo lohataona
Famatrarana Springs - Cylindrical Hot Roll Com ...
Helical lohataona; Zavatra name: helical lohataona. A miolakolaka loharano tariby vita amin'ny lohataona. Ary mbola hanohon fijery fahasamihafana Maro ny karazam-miolakolaka loharano, izay azo zaraina ho: tsotra cylindrical coil loharano; Hampihenana helical loharano. Araka ny fitarihan 'ny miolakolaka dia azo zaraina ho: kavia lohataona Right-nanolotra lohataona. Cylindrical coil loharanoko amin'ny rafitra tsotra, mora ny mpanamboatra sy be mpampiasa indrindra. Ny tsipika mampiavaka dia tsipika mahitsy, izay mety ho U ...
Helical lohataona; Zavatra name: helical lohataona. A miolakolaka loharano tariby vita amin'ny lohataona.
Ary mbola hanohon fijery fahasamihafana
Maro ny karazam-miolakolaka loharano, izay azo zaraina ho:
Tsotra cylindrical coil loharano;
Hampihenana helical loharano.
Araka ny fitarihan 'ny miolakolaka dia azo zaraina ho:
Cylindrical coil loharanoko amin'ny rafitra tsotra, mora ny mpanamboatra sy be mpampiasa indrindra. Ny tsipika mampiavaka dia tsipika mahitsy, izay azo ampiasaina ho famatrarana lohataona, fihenjanana lohataona sy ny torsion lohataona. Raha ny entana dia lehibe sy ny lafiny radiala dia voafetra, famatrarana loharano roa samy hafa azo ampiasaina diameters miaraka mba hanangana mitambatra lohataona.
Tsangana miolakolaka famatrarana faritra lohataona, anarana, fepetra arahana:
1. Spring tariby savaivony: D, ny lohataona tariby savaivony.
2. Spring ivelany Diameter: D0, manondro ny savaivony ivelany ny lohataona.
3. Spring anaty savaivony: D1, manondro ny savaivony anatiny ny lohataona, D1 = D-2D.
4. Ny savaivony ny lohataona: E2, ny eo ho eo ny savaivony ny lohataona, E2 = DD.
5. hitoby: T, Ankoatra ny fanohanana vava vola aminy, amin'ny sisiny roa, dia manondro ny axial lavitra roa mifanila vava.
6. Ny isan'ny mahomby Nifandimby N, ny isan'ny mitodika n2 fanohanana sy ny isan'ny Nifandimby N1, mba hanao ny asa amin'ny famatrarana lohataona miovaova, fanamiana hery, ny lohataona dia ho mafy sady mandimandina amin'ny sisiny roa, rehefa mpanamboatra. Ny ampahany ihany namongotra mafy manompo ho toy ny fanohanana, noho izany dia ny fanohanana peratra. Misy karazany telo ny fanohanana vava vola: 1.5, 2, sy 2.5, ary 2.5 no be mpampiasa indrindra. Ny sisa amin'ny faribolana dia mitovy foana amin'ny pitches, atao hoe mahomby laps. Ny isan'ny nifandimby N1 no isa ny isan'ny mahomby nifandimby N sy ny isan'ny fanohanana mampody n2.
7. Free avo: H0, ny haavon'ny tanteraka ny lohataona rehefa tsy tratran'ny tafika ivelany, H0 = NT + (n2-0.5) e.
8. hanitatra ny lavany: L, ny halavan'ny ny banga ampiasaina mba hahatonga ny lohataona, L≈n1√ (πD2) & sup2, + T & sup2 ;.
Ary mbola hanohon toetra
Miova savaivony miolakolaka lohataona Mizara ho: bongo coil lohataona, miolakolaka coil lohataona, concave coil lohataona.
Tapered coil cushioning loharano tsara sy mahatanty fananana be entana.
Helical coil loharano dia afaka mitahiry hery bebe kokoa sy ambony hanohitra enta-mavesatra, fa ny orinasa mpamokatra entana dingana sarotra kokoa.
Concave coil loharano mitovy amin'ny fampisehoana ny bongo coil loharano, ary ampiasaina amin'ny cushions sy kidoro.
Ho etỳ ambonin'ny vy ny lohataona tariby manodidina sy mahitsizoro manana endriny, ary ny boribory fizarana hazo fijaliana no ampiasaina matetika indrindra.
A coil loharano, ny loharano torsion, dia loharano izay iharan'ny torsional deformation, sy ny anjara asa ihany koa ny mandratra mafy endrika ho miolakolaka. Ny faran'ny firafitry ny torsion lohataona dia torsion sandry izay machined ho endrika isan-karazany fa tsy ny lelam-pitana. Torsion loharano matetika no ampiasaina amin'ny milina mandanjalanja rafitra ary be mpampiasa amin'ny orinasa famokarana toy ny fiara, fitaovana milina, fitaovana sy herinaratra.
Previous: Large lohataona - coil lohataona mafana mavesatra lohataona
Next: Soft fifandraisana ny mpankafy vava, malefaka fifandraisana ny silica gel lamba, lamba malefaka fifandraisana sy ny lelafo-retardant malefaka fifandraisana andian-dahatsoratra
Fambolena milina Spring
Fambolena milina Springs
Varahina Chip Conveyor
Bucket ascenseur Conveyors
Bucket ascenseur Fa Wood Chip
Cable Fiarovana Hose
Cnc Machine Fitaovana Towline
Arintany Mill Spring
Arintany Mine milina Spring
Coke lafaoro Spring
Construction milina Springs
Custom famatrarana Spring
Cylindrical Helical famatrarana Spring
Dgt Catheter tranony
Tsivalana Double Drag Chain
herinaratra TAPAKA FANTSONA
Engineering milina Spring
Engineering Plastika Towline
Milatsaka Sand Machine Spring
Fonosina tanteraka Towline
Nandrisika Metal Hose
Heavy Adidy Towline
High Speed ​​Silent Drag Chain
Belt Hinged Conveyor
Coil Hot Spring
Jr-2 mahitsizoro tarafin'ny Metal Hose
Machine Asa Light
Harena ankibon'ny tany milina Spring
harena ankibon'ny tany milina Springs
Oil milina Spring
Plastic mifono Hose
S miendrika Chain
Ary norakofako Type Chip Conveyor
fiara mifono vy Chain
Mampiditra Kofehy Chain
Mampiditra Kofehy Hose
Roa-Way Drag Chain
Sodina rivotra Vovoka Suction Sodina
Poti-kazo Transport Belt Conveyor
Poti-kazo Transport Conveyor
Fiarovana fonony for varingarina visy, varingarina d ...
Small cable chain, miniature guide chain, light...
Soft connection ny mpankafy vava, malefaka fifandraisana O ...
Manjaitra fiarovana fonony, zipper dustproof karazana ...
Dezhou Qingyun County Xinhualu, Shandong Province, Sina-tsy miankina ny asan'ny mpisava lalana zaridaina